iPhone inovanza covid-19 app mune yazvino i-OS 13.5 yekuvandudza: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 25 May 2020	• 20 Comments
Ini handina iPhone, saka handina kukwanisa kuzvitarisa, asi Apple webhusaiti zvakajeka nezvazvo. Nehurombo, vashoma vanoverenga mazwi nemamiriro ezvinhu vasati vaisa iyo yekuvandudza kana app, asi iwe unongowana iyo yekutsvaga yekushandisa inosanganiswa mune yazvino iOS 13.5 yekuvandudza.
Kana iwe ukandibvunza, izvi zvaive zvese zviri pasherufu. Ndoizve zvimwe zvandaigona kufungidzira mubhuku rangu uye ndakataurawo pakutanga kweiyi dambudziko rekorona kuti iri kuuya.
Tiri kuenda kunharaunda uko huwandu hwevanhu hwakaiswa pasi pehunyanzvi hwekutungamira uye chero isu tichienderera mberi nekutenda kuti mhinduro inodikanwa kuchinetso, hatizive kuti dambudziko rinogona kunge rakazvimiririra, kuti vanhu vanogamuchira matanho.
Tinogona ikozvino kutanga imwe kufamba kuti titange shanduko. Inotanga nekuziva kutsva, kudururwa kweiyo purogiramu uye kutendeuka kweruzivo mukusarudza. Enda ku www.dvd.nl kutora zvinhu mumaoko ako.
Facebook yakandirambidza kutumira kwemazuva makumi matatu ine chekuita ne ichi Greta Thunberg foto, saka tibatsirei kugovera zvinyorwa.
Tags: 13.5, App, apuro, corona dambudziko, coronavirus, Covid-19, Featured, iOS, iPhone, Tracking
"Kunyangwe wakaoneswa Covid-19"
Sokunge iwe uri pachena kune yakavonekwa radioactive radiation
Sanne Lejuwaan akanyora kuti:
Kwete Apple chete. Android yakafanana chaizvo mushure mekugadzirisa. Handife ndichigadzirisa zvakare, zvine musoro here? Handizivi. Chero zvazvingaitika, handibvumirane nazvo pachangu.
Ini ndinogovera chikumbiro chako kakawanda sezvazvinogona, asi chiri kutanga kuoneka nesimba kuti ruzhinji ruzhinji rwunofunga kuti rwakanyanya. Hazvinzwisisike… ..
Tinoda humwe hwakaoma kuvhara kutanga… asi kunyangwe zvakadaro vazhinji vacho vangangove vari pasi pehunyanzvi kubva munhau uye hapana chichachinja. Ngatirambei tine tariro.
Zvakanaka, isarudzo yevaranda. Chisarudzo chakanyatsofungidzirwa, zvakanakira muranda sezviri pachena zvichiri kupfuura izvo zvakaipa.
Izvi zvinoramba zvakadaro chero bedzi paine iye zvino 'akadzora dhorobha'. Nekuda kweizvi 'kuderedzwa', ivo vanochengeta kubata uye kutonga pamusoro penharaunda. Izvi zvinoshanduka mukuora mwoyo chaiko / kuderera. Iyo iripo 'yakaderedzwa kuputswa' inotungamirwa zvakajeka kumberi nevarume ve script mune zvikuru ruzivo. Kana varanda vakafungidzirwa kudzikira kwehupfumi etc. kuburikidza nekutya porn, izvo hazvina musoro nekuti zvivakwa zvichiripo zvakazara. Iko kushomeka uye mari inongodhindwa
uye / kana kuitwa kuti kuwanikwe kuburikidza nekombuta.
Varanda vari kujaira kudzikamisa maitiro avo. Saka zvimwe zvinotevera munguva pfupi iri kutevera. New scam demo munguva pfupi kana chimwe chinhu nemhedzisiro imwechete? Ivo vakomana vanofarira kukanganisa varanda. Zvese zvinobvira naHen. Uye Varanda vanoda mafaro, kuti ndizvo.
Awake akanyora kuti:
Ini ndinoitawo nepandinogona napo kuparidza chikumbiro sezvazvinogona.
Pakutanga ndaida kumutsa vanhu nekukurumidza, asi izvo zvinoguma zvisabudirira.
Zvakanyanya kuomarara kune vanhu vakarara. Iye zvino ndine imwe nzira. Ndinovapa ruzivo shoma kwazvo kuti vagowana chikafu chekufunga. Ndinoona kuti mushure mechinguva ivo pavanotanga kumuka zvishoma, ndinoenda zvishoma kumberi… kusvikira ini ndovanongedzera kuchikumbiro.
Nhamba izvozvi dzave shoma kwazvo. Ndine chokwadi chakasimba ... iyo nguva yakareba izvi zvinotora vanhu vazhinji kusaina chikumbiro. Uyu ndiwo chete mukana wedu zvakadaro. Kushivirira hunhu.
Iwe uchave wakanaka.
Kunyange zvakadaro, ini ndiri kuona vanhu vari kuwedzera kupindura kune mamwe masayiti uye vasingagutsikane nemisiano iripo. Usatonga nzvimbo idzo uye usanetseka nezve izvo Jensen kana Maurice de Hond anozivisa, asi tarisa pane vanhu vanouya uye vanopindura. Ndiwo eanoda kubatwa saka ramba uchireva nezvazvo http://www.fvvd.nl.
Martin, sekufunga iwe unokwanisawo kushambadzira zvipfeko pane iyo saiti (www.fvvd.nl), nekuti mumaonero angu meseji irikusimba kupfuura Jensen. Tarisa zvakare pane positivity iyo meseji inoparadzira kuvhurika. Iyo inopa vaverengi vako chimwe chikonzero chekureva kune iyo saiti. Iwe unogona kunyange kufunga nezve diki wristband, izvo zvingangoita zvishoma mutengi uye iwe pachako. Ichi chinogona kunge chiri chiratidzo che "Mhedzisiro", sezvakamboita Nike nemaArmstrong wristbands.
Pyotr akanyora kuti:
Ini ndakaitarisa, uye yakaiswa pane yangu admin foni. Iye zvino ini ndichiri kukwanisa kusarudza kuti ndinga bvisa, munguva pfupi ichave yekumanikidzirwa, kana iwe unofunga kuti yakabviswa, asi muchivande zviri kuvharwa. Hazvina kundishamisa futi.
Amareki akanyora kuti:
Ndingaiwana kupi izvi
Tine hurombo nemhinduro yekunonoka, asi enda kumamiriro ezvinhu ... wozoenda kuGoogle kurongedza, ..
Zvadaro, kana zvese zvikafamba zvakanaka, ona "Ziviso nezvekuvhurika kweCCID-19" kumusoro kwemasevhisi.
Uye usakanganwe pasipoti yevaxx iri kuuya strx, gwai (goyim) rinofanira kunge riine mushonga kudzivirirwa.
Ehe, vapomeri vanofungidzirwa vari chibhakera-zvakadzika muchiitiko ichi, track-track tax
Global Gadzirira Monitoring Board
peji 43 kuvat - Barber of the King member Sigrid Kaag
Uku kwaingova kutanga kweSalimoni uye kuguma hakuonekwi ...
Izvo zvese zviri pamusoro peiyo ID2020 yakabatana neye blockchain inopihwa nano vaccinations inotakurwa neIoT (5g) gidhi.
Vatambi vari muchirongwa ichi vari pachena:
hongu idd uye ichakurumidza kuve chidimbu chekeke kuroja IMB vanhu (vanobata tracers) kana masasi achizoraswa. MuEngland neItari nguva yasvika:
bounz akanyora kuti:
Ndakatoudza munhu wese mwedzi wapfuura,
uye pane zvishandiso zveApple app izvo zvinouya kuburikidza neGoogle PLAY DZESHURE….
uye apo ari pasi pezvikoro, GOOGLE .. tadaaaaaaa COVID19 brol.
asi kana iwe uchizobvisa zvidzoreso kubva pamasevhisi eGoogle kutamba (kuburikidza nezviridzwa, google play services uye wobva wadzvanya madhiri matatu kumusoro kuruboshwe uye sarudza kubvisa kubvisa ipapo)
aenda zvakare, uye HAPANA ZVIMWE KUPEDZESA idzo google play services! ! ! ! !
jeanette van gils akanyora kuti:
Ini handina kukwanisa kubvisa izvi 🙁
Ndakanga ndakanganisa, iine Android iyo, chaizvo neSETTINGS, ipapo GOOGLE, uye ipapo iwe uchaiwana.
Kupukuta. Kana iwe ukaenda kuSETTINGS, APPS neZiviso, ipapo Google Play Services, uye ipapo madheti matatu haasi kuruboshwe asi kurudyi kumusoro, kana iwe ukabaya pavari, iwe uchaona kazhinji DELETE UPDATES .. tinya kwavari.
ine Android 8 uye Android 10 (yangu ichangoburwa foni yandisina kushandisa senge mbozhanhare asi seyakanatswa Kamera lol. nekuti ndakachinjira kuNokia flip-foni kubva makore gumi nemashanu apfuura, kwandinotora bhatiri mangwanani ega ega zuva rinotanga kusvika kuma15 manheru. Asi ndobva ndaenda kuPLAY STORE .. uko kwandinako kumaSETTINGS. Kugadziriswa kwega, kwakadzimwa, uye zvakare kwete neWIFI (muchidimbu, NOOOOOIIIIIT zvimwe zvinogadzirisa zvinhu, ndinofanira kupa mvumo yega yega app ini 😉)
SUcces ndinovimba ichiri kushanda.
Tese kodzero dzedu dzakakosha dziri kutsikwa-tsikwa uye mhinduro dzeanowanzo fungidzirwa dzinogara dzichapihwa. Izvi zvinofanirwa kumira !!!!
UK's COVID-19 hutano data zvibvumirano neGoogle naPalantir pakupedzisira zvinobuda
Chaizvoizvo chiitiko chimwe chete izvozvi zvakare kune rimwe divi renyika, inoratidza nzira yakasarudzika uye yakaiswa munzira uko kwayakaiswa rusununguko rwenyika.
« Maurice de Hond anowana imwe nehafu yemamita kutonga nonsense (vhidhiyo)
Simba rekushandura rinotanga nekudeura kwekutya, kuronga uye kunyepa kwenhema uye kushanduka kuva shanduko yechokwadi »
Kushanya kwakazara: 4.244.865